Northern Exposure | Myanmar Business Today
Home to Khakaborazi, the country’s highest mountain, Kachin State offersalot of tourist attractions, from scenic views and landmarks to cultural festivals. Among the highlights areahomemade beverage called Khaungyay, the Manaw Festival, traditional dance and customs, wild flowers and Sadone Waterfall.
You can find out more about the state simply by Googling, and withabudget of K300,000, you can see Kachin in person.
The state is blessed with great tourism potential, but much of that potential has so far remained untapped. Local tour companies hope for better transportation, which they believe will improve tourism not only for the state but for Myanmar asawhole.
“We all know that tourism benefits all sectors inasustainable way,” said Seng Hkum, managing director of local tour company Green Xingra. “There arealot of opportunities for tourism development in Kachin State, and transportation playsacritical role in tourism development. People in Myanmar know Kachin State and want to visit. The problem is that it is too costly. The fastest transportation mode is travelling by plane. Butaone-way ticket costs over K100,000, which is equivalent to an overseas trip. We want to urge the local and Union governments to work for better transportation.”
The state is where the country’s longest river, the Irrawaddy, originates, with ice capped mountains in the background. It also has Indawgyi Lake, home to migratory birds as well as rare species and biodiversity. One-way plane tickets to the state cost K150,000 for most of the year and K130,000 in the rainy season.
“Migratory birds often migrate to Kachin State from Siberia and Japan in the winter. You can do research in addition to enjoying the scenic views of Myitsone Region and traditional cultures,” said Seng Hkum. “Moreover, Kachin State hasarich variety of cultures and ethnicities. It even has Tibetans. There arealot of investment opportunities for hotels and restaurants.”
Permanent Secretary for Investments and Foreign Economic Relations U Aung Naing Oo has said that Kachin State has good potential for ecotourism. There are 30 tourism companies registered in the state, but onlyadozen of them are actually operating. A lot of opportunities, therefore, remain untapped.
During open and holiday season, the ice capped mountain areas often receive hundreds of visitors. The state now has jade mines and gold mines, but these have their limits and one day they will be gone. Tourism, in contrast, offers opportunities for sustainable development, economically and environmentally.
“Travel trends among young people have changed,” said Green Xingra’s chief. “They choose to visit wildlife areas and go on adventure trips such as trekking. Climbing Phonkanrazi, at 12,000 feet the lowest of the mountain ranges, will take eight days to climb up and back. If you can travel more, you can trek the Phonrinrazi mount, 13,800 feet high, which will take nine days. And there are higher ones.”
Despite an abundance of attractions, Kachin State has suffered setbacks includingalack of better transportation and high costs of accommodation and transport. Successfully addressing these issues will open upaworld of opportunities not only for locals but also for visitors wanting to experience the state’s many wonders.
သယံဇာတပေါတယ်လို့ နာမည်ကျော်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က မြန်မာပြည်ရဲ့ မြောက် ဘက်အစွန်းပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းက ဝန်းရံထားပြီး အရှေ့တောင် အာရှအမြင့်ဆုံးတောင် ခါကာဘိုရာဇီရှိရာ ဒေသ ကချင်ပြည်က မြန်မာပြည်ရဲ့ခရီးသွား နေရာကောင်းတွေ အများကြီးထဲကတစ်ခုပါ။ ဒေသထွက် ယမကာတမျိုးဖြစ်တဲ့ ခေါင်ရည်၊ အထင်ကရ မနောပွဲတော်၊ ဂျိမ်းဖောအက၊ ရိုးရာကချင်ထည်လေးတွေ၊ ကချင်တောပန်း လေးတွေ၊ ဆဒုံးလန်နခရေတံခွန် စတဲ့ ခရီး သွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် အချက်လေး တွေက ကချင်မြေကို ခရီးသွားနေရာအဖြစ် ဖော်ဆောင်ဖို့ လုံလောက်လှပါတယ်။
အလွယ်တကူသွားဖို့အတွက် အွန်လိုင်းမှာ အချိန် နည်းနည်းပေး ရိုက်ချလိုက်ရုံနဲ့ ကချင် ပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေက ကျလာနိုင်ပါ တယ်။ ယေဘူယျခရီးစဉ်တွေထဲမှာ ပါလေ့ရှိ တဲ့နေရာတွေကတော့ မေခ-မလိခ မြစ်ဆုံ၊ ကချင်ပြည်နယ်အမှတ်အသား မနောကွင်း၊ ဆဒုံးလန်နခရေတံခွန်၊ မြို့တော် မြစ်ကြီးနား နဲ့ မြို့တော်ညဈေး၊ ဆုတောင်းပြည့်နှင့် လျောင်းတော်မူဘုရားကြီး၊ ဘုရားတစ်ထောင် အောင်စေ ရန်အောင်ဘုရားကြီးတို့က ပါလေ့ ရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦးကို ကျပ် သုံးသိန်းလောက် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ သွားလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအချို့ကတော့ ဒေသခရီး သွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး ပိုကောင်းလာဖို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ Green Xingran Eco-Tour & Travel
က မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဆန်ခွန်က တော့ အခုလိုပြောပါတယ်။
”ခရီးသွားလုပ်ငန်းက အားလုံးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလုပ်ငန်းက တခြားသော ကဏ္ဍအသီးသီးကို အများကြီး အကျိုးပြုတယ်။ ဒီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး လာရင် တခြားကဏ္ဍတွေလည်း စဉ်ဆက် မပျက် ဖွံ့ဖြိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွား ကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်က အခွင့်အလန်းတွေ အရမ်းကြီးရှိနေတယ် အဲဒီမှာ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍက အလွန်အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ် အခု များသောအားဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကို သိလာ ကြတယ်၊ လာချင်ကြတယ်။ ပြဿနာက ကချင် ပြည်ကိုလာရင် စရိတ်နည်းနည်း ကြီးနေတယ်။ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လေယာဉ်နဲ့ လာရမယ်။ အဲဒါကလည်း အလာတစ်ကြောင်း တင် တစ်သိန်းကျော်နေပြီ။ အဲဒီနှုန်းက နိုင်ငံ ခြားသွားတဲ့ စရိတ်နဲ့ ညီမျှနေတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို ပံ့ပိုးပေးစေချင်တာ ကတော့ ဒီလမ်းပန်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍကို အများကြီး တိုးတက်အောင် လုပ် ဆောင်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”လို့ ပြောပြ ပါတယ်။
ဧရာဝတီစတင်ရာနေရာရှုမျှော်ခင်း၊ ဟိမ ဝန္တာတောင်တန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ ရေခဲတောင် တန်းတွေ၊ဆောင်းခိုငှက်တွေ အမြောက်အ များတွေ့ရတဲ့ အင်းတော်ကြီးအိုင်၊ ပူတာ အိုလို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ရှားပါးတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေ၊ ဇီဝ မျိုးကွဲပေါင်းစုံကျက်စားနေတာက ကချင် မြေရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုလိုတောင် ဖြစ် နေတာပါ။ သွားလာရသိပ်မလွယ်ပေမယ့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ကနေ မြစ်ကြီးနား လေယာဉ်စရိတ်က တစ်ယောက်ကို လမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွက် ကျပ် တစ်သိန်းခွဲရှိပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ တစ်သိန်းသုံးသောင်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒေသခံလည်းဖြစ်တဲ့ ဆန်ခွန်က သွားလည် ပတ်စရာနေရာတွေ လေ့လာနိုင်မယ့်အရာ တွေအကြောင်းကို အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
”အထူးသဖြင့် ဆောင်းခိုငှက်တွေဆိုရင် ဆိုက်ဘေးရီးယားတို့ ဂျပန်တို့က ပျံသန်းလာ ပြီး ဒီမှာဆောင်းလာခိုတာရှိတယ်။ ဒီမှာ ဆိုရင် သိပ္ပံဘာသာရပ်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ မြစ်ဆုံ ဒေသဆိုရင် အရမ်းကို သာယာလှပတယ်။ ပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ်က ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တွေလည်း ြ<ွကယ်ဝတယ်။ ဒီမှာဆိုရင် တိုင်း ရင်းသားအားလုံးရှိတယ်။ မြောက်ဘက်မှာဆို ရင် အခုထိ တိဗက်လူမျိုးတွေ ရှိသေးတယ်။ ပြီးရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ဒီမှာလာပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် အများကြီး အခွင့် အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပူတာအိုမှာဆိုရင် မြို့ကိုပတ်လို့ရမယ့် မချမ်းဘော၊ ကျောက် နဂါး၊ မိုလာရှီးဒီ ကောင်းမှုလုံစေတီ ပြီးရင် အဲဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ ရှမ်းရွာတွေ လီဆူးရွာ တွေ လည်ပတ်လို့ရမယ်”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမြဲတမ်းအတွင်း ဝန်ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်နိုင်ဦး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကချင်ဒေသက Eco Tourism
အဖြစ် ဆောင် ရွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိ နေတယ် လို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိပြည်နယ်အတွင်းမှာ ခရီးသွားလုပ် ငန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃ဝ ရှိနေပြီး ၁ဝ ခု လောက်ပဲ အမှန်တကယ် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကချင်ပြည် နယ်အတွင်းမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ၊ စားသောက် ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာ လာရောက်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်ရင် အခွင့်အလမ်းတွေ အများအပြားရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံ ဆန်ခွန် က ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရေခဲတောင်ဒေသမှာ ဆိုရင်တော့ ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပြီး ရုံးပိတ် ရက်ရှည်ဖြစ်တဲ့ ဧပြီလအတွင်းမှာတော့ နှစ်စဉ်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူ ဦးရေ ရာဂဏန်းကျော် ရှိတတ်ပါတယ်။ ပိုမိုတိုး တက်လာတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ခြင်းတွေ၊ ရွှေတူးဖော်ခြင်းတွေက လည်း အတိုင်းအတာဖြင့် ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုသယံဇာတတွေ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရင် ကချင် ပြည်နယ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးပိုင်းမှာ ရေရှည် စဉ်ဆက်မပျက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အခုလို ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍက အရေးပါ မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ သူကရှင်းပြထားပါတယ်။
”အခုလူငယ်တွေကလည်း ခရီးသွားပုံစံ တွေ ပြောင်းလာကြတယ်။ မြို့ပြရဲ့ မွန်းကြပ် တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး သဘာဝ တောတောင်ရေမြေတွေရှိတဲ့ နေရာတွေကို သွားလာကြတာ ပိုပြီးများလာတယ်။ အနီးဆုံး ရေခဲတောင်ဖြစ်တဲ့ ဖုန်ကန်ရာဇီ အဲဒါက အနည်းဆုံး ရှစ်ရက် အသွားအပြန် လမ်း လျှောက်ရတယ်။ အဲဒါက အနိမ့်ဆုံးတောင် ဖြစ်တယ်။ ပေပေါင်း ၁၂ဝဝဝ ရှိတယ်။ ဒီထက် ပိုပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖုန်ရင်ရာဇီ ရေခဲ တောင်ဆိုတာ ၉ ရက်လောက် လမ်းလျှောက် ရမယ်။ ပြီးတော့ ရေခဲတောင်တွေက အဆင့် ဆင့်ရှိတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ခါကာဘိုရာဇီနဲ့ တခြားနေရာ တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်”လို့ သူက ရှင်း ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ သဘာဝတော တောင်ရေမြေတွေ ပေါြ<ွကယ်ဝပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနေပေမယ့် နိုင်ငံ အတွင်းမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် သွားလာရေးစရိတ်တွေ၊ တည်းခို နေထိုင်ခတွေရဲ့ အဆမတန် များပြားတဲ့ အတွက်တော့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေပါ တယ်။
Previous articleTrading on YSX Dropped by K1 billion in October
Next articleYangon to Tackle Unauthorized Overhead Cables